Baolina lavalava – « Gold Top 20 » :: Voahosotra ho tompondakan’ i Madagasikara fanindiminy ny Cosfa • AoRaha
Baolina lavalava – « Gold Top 20 » Voahosotra ho tompondakan’ i Madagasikara fanindiminy ny Cosfa
Niady hatramin’ny farany ny lalao. Nandrombaka ny anaram-boninahitra, Tompondakan’i Madagasikara 2019, amin’ny taranja baolina lavalava ny klioban’ny Cosfa. Nandavo ny TF Anatihazo (TFA) tamin’ny isa 28 noho 27 izy ireo, omaly, teny amin’ny kianja Makis Andohantapenaka.
Henjana ny lalao vao nahazo an’ity anaram-boninahitra fanindiminy ity ny Cosfa sady nitondra ny lelavola mitentina 4 tapitrisa ariary. Nody niaraka tamin’ny 2 tapitrisa ariary kosa ny lefitry ny tompondakan’i Madagasikara TFA.
“Mafy ny lalao. Nanana ny fomba filalaony ny TFA mba handavony anay. Nanano sarotra, noho izany, ny nanafika azy ireo. Nanahirana hatramin’ny fiafaran’ny minitra farany ny fifandonana”, araka ny fanazavan’Andriamamonjy Onjanirina, mpanazatra ny Cosfa. “Niezaka nanaraka ny paikady napetraky ny mpanazatra izahay. Tany amin’ny fiarovan-tena no tena namafisina sady nanao izay tsy hahazoana fahadisoana”, hoy Ratsimbazafy Jacky, kapitenin’ny Cosfa, nanamafy.
Akaiky ny amboara ny TFA sady nanao ny ainy tsy ho zavatra. Nivadibadika sady nifanakaiky hatramin’ny niandohan’ny lalao ny isa. Nitarika tamin’ny isa tokana 20 noho 19 kosa ny mpilalaon’ny Cosfa mialoha ny fialan-tsasatra. “Diso nikoropaka loatra izahay. Teo ihany koa ny tsy fahampian’ny fifantohana sady nanao tandrevaka kely tamin’ny fizaram-potoana faharoa”, hoy Rakotoarimanana Gaston, kapitenin’ny TFA.
Voahosotra ho mpilalao mendrika indrindra nandritra ny fifaninanam-pirenena Rakotonirina Patrick ao amin’ity ekipa farany ity. Nahazo ny lelavola mitentina 750 000 ariary ity mpilalao laharana fahafito ity. Mpilalao nampiditra baolina betsaka indrindra indray Raharijaona Mickael ao amin’ny klioba FT Manjakaray (FTM) niaraka amin’ny lelavola 550 000 ariary
Tsiahivina fa ireo ekipa niatrika ny lalao famaranana ireo no hiaro ny voninahi-pirenena mandritra ny fiadiana ny amboaran’ny ranomasimbe Indiana ho an’ny klioba tompondaka (CCCOI). Hosoloin’izay laharana fahatelo kosa ny toeran’ny Cosfa raha toa ka tsy mahaloa ny trosany any amin’ny fikambanan’ny firenena eto amin’ny ranomasimbe Indiana (AROI) izy ireo, raha ny nambaran-dRakotomalala Mercel, filohan’ny Malagasy Rugby. Mbola tsy voafaritra anefa ny daty hanatanterahana ny fiadiana ny laharana fahatelo eo amin’ny FTM sy ny Cnaps.
Lomano tompondaka nasionaly Mety tsy ho tanteraka ny fifaninanam-pirenena
Tsipy kanetibe Voatazona ny datin’ny « Mondial 2020 »
Fifanafihan’ny tanàna roa :: Voasambotra ilay voatondro ho raindahiny amin’ny vono olona
Antenimierampirenena :: Andrasana ny didin’ny HCC momba ny fanoloana an’ireo depiote migadra